Prezidaantiin Yunaaytis Isteetes Joo Baaydiin Kamiisa borii gita isaanii kan keniyaa Uhuuruu Keenyaattaa Waayit Haawuus keessatti simatanii dubbisuuf jiran.
Kunis Yunaaytiid Isteetes biyya ollaa Keniyaa taatee Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu’iinsa uumamee keessaa kanneen harka qaban mara irra uggura ka’auuf ilaalaa yeroo jirtuutti.
Baaydiin aangoo prezidaantummaa eega qabatanii as hogganoota biyyoota Afrikaa Waayit Haawuus keessatti simatanii ennaa dubbisan kun kan jalqabaa ti.
Dubbii himtuun Waayit Haawuus Jeen Saakii ibsa baasan irratti, Deemookraasii fi mirga dhala namaa kabajsisuu, nagaa fi nageenya tarkaanfachisuu, dinagdee guddisuu fi jijjiirama qilleensaa ittisuu irratti yaalii gaggeeffaman kan ilaaleen aangawoonni lameen dubbatu.
kan yeroo yerootti jijjiiramuu prezidaantummaa gola naga eegumsaa kan Tokkummaa Mootummootaaf Keniyaan baatii keessa jirru Fulbaanaaf dabaree argattee gaggeessaa jirti.Yunaaytid Isteetes fi Keniyaan dhimmootii dinagdee fi nageenyaa akkasumas shoroorkeessummaa dura dhaabachuun walta’iinsa yeroo dheeraa qabaataa turan.
Rakkoon Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa hammaachaa dhufuu isaa irraa kan ka’e namoonni kuma hedduun ajjeefamanii, kanneen miliyoona hedduu ta’an gargaarsa dhala namaa eeggataa waan jiraniif jecha, bulchiinsii prezidaant Baaydiin tarkaanfii dhiibbaa geesisuu fudhachuuf ilaalaa jira.
Waraannii Itiyoopiyaa gaafa Wiixataa qabee kanneen humnootii Tigraay ofiin jedhan irratti haleellaa lafoo gaggeessuu jalqabuu isaa Addi Bilisummaa Uummata Tigraay (TPLF) beeksisee jira.
Baatii Sadaasa bara 2020 humnootii Fedeeraalaa Kan Itiyoophiyaa fi looltoota TPLF fiif amanamoo ta’an giddutti wal waraansii jalqabamuun ni yaadatama.